Nolosha badan! – Kaasho Maanka
Diimaha Buddhism-ka, Hinduuga iyo Sikha waxa ay ka simanyihiin aragtida ah in qofku si meerta ah usoo maro dhawr dhalasho iyo nolol kala duwan. Dhalashooyinka kala duwan ee uu qofku soo maro waa kuwo ka baxsan wacyiga iyo garashada qofka. In kastoo laga yaabo in qaarkiin ku qoslayaan aaminaadda noocaasi ah ee aanan la caddayn karin, haddana waa arin ku qoran buugtooda iyo aayaadkooda barakaysan sida Bhagavad Gita-ha Hinduuga, sidaas ayayna ku rumeeyeen qaab duuduub ah.
Maxay macno samaynaysaa in aan intaas oo goor hadda kahor soo noolaa balse aanan is xusuusan karin in aan ahaan jiray Geelle, Saxarla iyo Gallad? Waxa jiritaankaygaas kala duwan ee faraha badnaa macanaha u yeeli lahaa, waa aniga oo is xusuusta. Haddii aysan xusuus jirin, ma tihid midkii hore si kasta oo aad boqolaal jeer oo hore u noolaydba, oo marwalba mid cusub baad tahay.
Xusuusta iyo qeybaheeda kala duwan waa awoodda ay maskaxda u leedahay in ay kaydiso macluumaadka, dibna usoo hawl galiso markii loo baahdo. Haddaba xusuusta waxa ay ku qotontaa oo ay ka dhalataaa hab shaqayn maskaxeed. Xusuustu waa natiijo ka dhalata shaqo maskaxda qabato. Waa sida socodka gaarigu u yahay natiijada shaqo ay qabanayaan qeybaha kala duwan ee gaariga.
Haddaba suurtagal ma tahay in inta uu jirku dhinto ay xusuustu noqoto mid sii jirta oo ka soocanta kaligeed jirka intiisa kale? Cilmi ahaan, ma jirto hab ay xusuus kaligeed usii jiri karto ayada oo uu jirkii dhintay. Marnaba ma dhici karayso in socodka gaariga – aan tusaalaha kore kusoo qaatay – uu kaligiis sii jiro ayada oo uu gaarigii burburay oo uu daxalaystay.
Diinta Islaamka laftigeeda kama marna aaminaadda dib u soo noolaanshada, in kastoo sida Isalaamka u dhigo ay tahay mid ka duwan sida ay diimaha kale u dhigaan. Dib usoo noolaanshada Islaamka waxa ay ka bilaabataa goorta qofka qabriga la geeyo waxa ayna socotaa abidkeed. Qofka ku dhintay qarax diyaaradeed waxa uu isla judhiiba helaa noloshiisii isla goorta qabriga la dhigo qeyb yar oo jirkiisii ka mid ah, si su’aalo loo waydiiyo oo loo imtxaano.
Aaminaadda nolosha dambe ee aan dhamaan waa mid muhiim u ah Islaamka, halka diimaha Hinduuga, Buddhism-ka iyo Sikha ay muhiim uga tahay nolosha meertada ah ee ay halkaan ku haystaan.
W/Q: Gallad Gurxan 19th July 2019